Ngiyajabula ukuthi ucele! Uma uhlobo oluzonda ngempela ukwenza амагама noma olwesabekayo nje, ngiye ngathola amathiphu ambalwa namacebo ambalwa ukukusiza ukuthi udale futhi ukhethe igama eliphelele ibhulogi yakho.
3.1 I-Level Level yePro: Ukusebenzisa i-Made-up Word noma Ukufaka Amazwi Akho Amazwi
4 Ithiphu # 4: Uma Yonke Ihluleka, Sebenzisa i-Blog Name / Word Generator
Igama lebhulogi yakho kufanele lihlotshaniswe nohlobo lokuqukethwe okwenzayo. Cabanga ukuthi unomlando obizwa ngokuthi "i-Foodie Corner" kodwa okuqukethwe kwakho konke okuphathelene nokubuyekezwa kwemikhiqizo yemisindo yemvelo yamadoda, uzophelisa abafundi abadidekile ababengalindele ibhulogi yokudla.
Uma ibhulogi yakho imayelana namasu wokumaketha okudijithali, sebenzisa amagama angukhiye ahlobene nalawo mboni noma asebenzise imigomo ethile (imboni ye-SEO, ukumaketha kwe-digital, i-SEM nokunye).
Hlanganisa lawo mazwi ku -sasausus.com futhi uzothola amagama afana nesidla, i-grub, i-fresh, ilungile, injabulo, i-goodies, ukudla, i-munchies, eqinile, i-hearty, i-veggies, nenjabulo. Engeza amanye alawo mazwi ndawonye (нейгокути i-munchies ye-vegan или zokupheka ukudla okufanele) futhi voila, unegama lebhulogi yakho.
Ngomzekelo webhulogi wezokudla, ungangeza izina noma amagama achazayo ahlobene nawe njengebhulogi, okungaba: u-boss, umfana, intombazane, oqalayo, ukudla, izeluleko, isidlo sasekuseni, isidlo sakusihlwa, isidlo sasekusem, isidkla salushu, isidko sailku, isidko sailku, isidko sailku, isidko sailku, isidko sailku, isidko sailku, isidko sailku, isidko sailku, isidlo sail.
Zibeke ndawonye futhi uzothola amagugu afana nokudla okufanelekile kwentombazane, i-vegan boss munchies, ukupnoheka kwekhishi ehlanzekile, noma i-club yokudla enepilo.
I-Level Level yePro: Ukusebenzisa i-Made-up Word noma Ukufaka Amazwi Akho Amazwi
Kulabo abathandekayo ngokweqile, ungazama ukusungula noma ukudala амагама amasha ngokuphelele ukuze ubhale kubhulogi yakho.
Lokhu kudinga kancane ukucabanga okungaphandle kwe-ibhokisi kodwa okwenziwe kungaba yindlela enhle yokwengeza kumnandi egameni lakho lebhulogi. Ezinye izibonelo ezinhle zizoba yi-snackzilla, i-veganized, i-sizzlerella, i-healthsy.
Ungesabi ukuzama zonke izinhlobo zamagama futhi ujabule ngawo. Откачете се от igama elipholile okungekho owake wacabanga ngalo!
Ithiphu # 4: Uma Yonke Ihluleka, Sebenzisa i-Blog Name / Word Generator
Mhlawumbe uzame winke amathiphu ngenhla futhi awukwazi ukuvela ngegama elihle kakhulu. Azikho izinkinga! Zama ukusebenzisa amagama / амагама akhiqiza ezinye iziphakamiso ezinhle.
Amasayithi afana I-Wordroid.com iyithuluzi elihle lokuza nenhlanganisela yegama elijabulisayo futhi kulula ngempela ukwenza. Vele ufake igama elihlobene nokuqukethwe kwakho, chofoza inkinobho ye "wordoids", futhi izokunika uhlu lwamagama ongawasebenzisa.
Okuhle nge-Wordroids ukuthi ungabeka umkhawulo wamagama akho, uchaze ikhwalithi yamagama, usethe amaphethini kuwo, futhi ufake ngisho nokutholakala kwegama lesizinda. Lokhu kusho ukuthi ungabheka ukuthi igama olithandayo ku-.com elibhalisiwe noma cha, ukukhipha ukucindezeleka kokukhwabanisa okumangalisayo nokuthola ukuthi kuthathwe.
Kunezindlela eziningi zokubiza ibhulogi futhi ekugcineni, kungcono kuwe ukuthi unqume ukuthi yilokho.
Khumbula, ayikho imithetho enzima uma ifika ekwenzeni igama. Uma nje uqinisekisa ukuthi ibuyele emuva kokuqukethwe kwakho, ungaba ngukudala свояgoba ufuna!